Nhau - Parizvino, iro lithiamu bhatiri uye simba rekuchengetedza lithiamu bhatiri zvinokosheswa kwazvo muindastiri.
Hydraulic Dunhu Remake
MCB Ine Padlock
Dunhu Rinotyora Rinobatsira accessories
Bhuruu akateedzana Dunhu Rinopwanya
M Nhepfenyuro Dunhu Rinopwanya
Green Series Dunhu Remake
Zvikamu zveSeketi Kuputsa
Jekiseni richigadzirisa Machine
Kushandisa michina Line
Microcomputer Akangwara Anodzivirira
WiFi smart switch & soketi
Chinja & Socket
Kudzora Uye Kudzivirira Chinja
Otomatiki Transfer Transfer
Ground Kukanganisa Dunhu Kupindirana (GFCI)
Magetsi Wiring Midziyo
Taura & Relay & Starter
Metal Base Chiputuru Chakavha
Indoor Yakakwira Voltage
Kunze Kwakakwira Voltage
Nguva & Meter
Isina Magetsi Magetsi
Isapinda Mvura & Chigadziko
isina mvura switch & soketi
Mamiriro ekunze Akadzivirirwa Chinja
Kuchengetedzwa Kudzivirirwa Mudziyo (SPD)
Pakati Pakati Voltage
SF6 Circuit Remake
Epoxy Net Kabineti
PV Mubatanidzwa Bhokisi
Push Button Chinja
EX Uchapupu Hwemagetsi
Simba Rinopa Rinodzora
Makakatanwa Clamp And Suspension Clamp
Kuboora Connector Clamp
Kurumidza Joint Series
Kuisirwa Turu Uye Zvishandiso
thermostat & tembiricha controller
Metallzed Firimu KwaCapacitor
Parizvino, iro lithiamu bhatiri uye simba rekuchengetedza lithiamu bhatiri zvinokosheswa kwazvo muindastiri.
Parizvino, iko kwehunyanzvi kushandiswa kwe lithiamu bhatiri mune simba rekuchengetera rinotarisa zvakanyanya kuminda ye grid base chiteshi chekumira magetsi, imba yekuchengetera system, mota dzemagetsi uye zviteshi zvekuchaja, zvishandiso zvemagetsi, zvishandiso zvemuhofisi epamba uye mimwe minda. Pakati pegumi nematanhatu eChirongwa cheMakore mashanu, musika wekuchengetera magetsi weChina uchatungamira mumunda wezvinhu zveruzhinji, nekupinda kubva pachigadziko chemagetsi nerutivi rwekutapurirana kuenda kudivi remushandisi. Sekureva kwedata, iro rekushandisa vhoriyamu reti lithiamu bhatiri rekuchengetedza musika mu2017 raive rinenge 5.8gwh, uye mugove wemusika we lithiamu-ion bhatiri icharamba ichiwedzera zvishoma nezvishoma gore rimwe nerimwe muna 2018.
Zvinoenderana nezviitiko zvekushandisa, lithium-ion mabhatiri anogona kuganhurwa mukushandisa, simba uye simba rekuchengetedza. Parizvino, iro lithiamu bhatiri uye simba rekuchengetedza lithiamu bhatiri zvinokosheswa kwazvo muindastiri. Maererano nekufungidzira kwevane masimba nyanzvi, huwandu hwesimba re lithiamu bhatiri mune ese mashandisirwo e lithiamu bhatiri muChina anotarisirwa kukwira kuenda ku70% na2020, uye bhatiri remagetsi rinova iro simba guru re lithiamu bhatiri. Simba lithiamu bhatiri rinova iro rinonyanya kuita lithiamu bhatiri
Iko kukurumidza kukura kwe lithiamu bhatiri indasitiri inonyanya kukonzerwa nemutemo unokurudzira kuvandudzwa kwesimba nyowani mota indasitiri. Muna Kubvumbi 2017, iyo Ministry yeindasitiri uye ruzivo rwetekinoroji yeRepublic yeChina yakataura zvakare mune yazvino "yepakati uye yakareba term chirongwa chekuvandudza chemotokari indasitiri" kuti kugadzirwa nekutengesa kwemagetsi esimba mota zvinofanirwa kusvika 2 miriyoni muna 2020, uye kuti magetsi emagetsi matsva anofanirwa kuverengerana anopfuura makumi maviri muzana% ekugadzirwa kwemotokari nekutengesa panosvika gore ra2025. Zvinogona kuonekwa kuti simba nyowani pamwe nekuchengetedza simba girini uye mamwe maindasitiri ekudzivirira nharaunda achave akakosha mbiru maindasitiri enzanga mune ramangwana.
Mune ramangwana maitiro esimba bhatiri tekinoroji, ternary iri kuve huru maitiro. Inofananidzwa ne lithiamu cobalt oxide, lithium iron phosphate uye lithium manganese dioxide mabhatiri, ternary lithium bhatiri ine hunhu hweakakwira simba density, yakakwira voltage chikuva, yakakwira pombi density, yakanaka kutenderera kuita, kugadzikana kwemagetsi uye zvichingodaro. Iine zvakanakira pachena mukuvandudza huwandu hwesimba remagetsi magetsi. Panguva imwecheteyo, zvakare ine zvayakanakira yesimba goho simba, yakanaka yakaderera tembiricha kuita, uye inogona kujairana kune ese-ekunze tembiricha. Kune mota dzemagetsi, hapana mubvunzo kuti vatengi vazhinji vane hanya nekutsungirira uye kuchengetedzeka, uye bhatiri re lithiamu-ion zviri pachena sarudzo iri nani.
Nekuwedzera nekukurumidza kwekuda kwemotokari yemagetsi, kudiwa kwesimba re lithiamu-ion bhatiri rakawedzera zvakanyanya, iro rave iro simba guru rinotyaira kukura kwekambani ye lithiamu-ion bhatiri. Lithium bhatiri chigadzirwa chakaomarara kwazvo. Yakazvarwa muma1980 uye yakave nenguva yakareba yekunaya uye tekinoroji hunyanzvi. Panguva imwecheteyo, zvisinei hazvo kugadzirwa kana kuparadza maitiro e lithiamu bhatiri haina kukuvadza zvakanyanya kune zvakatipoteredza, zvinoenderana zvakanyanya nezviri kudiwa nevezvemagariro budiriro. Naizvozvo, lithiamu bhatiri rave musimboti wekutarisa kwechizvarwa chitsva chesimba. Munguva yepakati, iyo yazvino yekufambisa tekinoroji kusimudzira ndiyo musimboti wepasirese application tekinoroji kusimudzira. Sechinhu chakakosha kutsigira chigadzirwa chekufambisa tekinoroji kusimudzira, simba lithiamu bhatiri rinotarisirwa kuve nehukuru hukuru mumakore anotevera 3-5 makore.
Post nguva: Sep-28-2020
© Copyright - 2020-2020: Rutsigiro rwehunyanzvi: